आज फागुन शुक्ल पूर्णिमा, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा होली पर्व मनाइँदै | सुदुरपश्चिम खबर
आज फागुन शुक्ल पूर्णिमा, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा होली पर्व मनाइँदै
आज फागुन शुक्ल पूर्णिमा, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा फागु अर्थात् होली पर्व मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ ।
सुदूरपश्चिममा भने देउडाकाे रूपमा खेलिने हाेली ३/४ दिन पहिलेदेखि सुरू भएर आज समापन हुने गर्दछ । हाेली दार्चुला, बैतडी लगायतका जिल्लामा प्रख्यात छ ।
डाक्टरहरुले पनि पहिलेका वर्षहरुमा जस्तो यसपटक जमघट भएर होली नखेल्न आग्रह गरेका छन् । भिडभाडमा जाँदा र पानीमा भिज्दा सङ्क्रमणको डर हुने भएकाले सजक हुन उनीहरुको आग्रह छ । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको प्रभाव नदेखिए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उच्च जोखिममा राखेकाले सतर्कता अपनाउन प्रशासनले अनुरोध गरेको हो ।
यसैगरी द्वापरयुगमा श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्न कंशद्वारा पठाइएकी राक्षसनी पुतनाले आफ्नो विष दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई मारिइन् । उनलाई व्रजवासीले जलाई फागु महोत्सव मनाउने परम्परा चलेको पनि धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । तराईमा भने मङ्गलबार होली मनाइँदै छ ।
चाकु, घ्यू, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, लगायत अन्य परिकार खाएर आज...
On चाकु, घ्यू, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, लगायत अन्य परिकार खाएर आज माघे (मकर) संक्रान्ति पर्व मनाइँदै !! प्रत्येक वर्ष सौर मासअनुसार माघ महिनाको पहिलो...
जीवन लाई सुखी बनाउने नौ सरल उपायहरु
On जीवन लाई सुखी बनाउने नौ सरल उपायहरु मनिसले जीवनमा सुखदुःख आफ्नै कारणले भोग्छन् । सुखका लागि आफ्नो कर्मलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । यसबारे...
दोस्रो सन्तान जन्माउनु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
निश्चित समयान्तरमा दोस्रो बच्चा जन्माउनु नै राम्रो हो । तर, दोस्रो पटक गर्भधारण गर्दा भने केहि कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । १. उमेर उमेर...
तपाईंका बालबच्चा तनावमा त छैनन् ? बेलैमा होस नपुर्याए खतरानक
तनाव हुने कुनै उमेर हुदैँन यो साना बालबालिकामा पनि हुने गर्दछ । कतिसम्म भने बोल्न नसक्ने बालबालिकामा पनि तनाव हुने गर्दछ । साना बालबालिकामा भोक...